Home / समाचार / सुतेकी छोरीलाई दुध चुसाउनु मन लाग्यो तर ब्यूझेर रून्छ कि भनेर छोडेर विदेश हिडेँ….
सुतेकी छोरीलाई दुध चुसाउनु मन लाग्यो तर ब्यूझेर रून्छ कि भनेर छोडेर विदेश हिडेँ…. 0
दिपिका भुसाल । मेरो नारकीय जीवनको उत्कर्षको समय थियो त्यो सायद दशैंको बेला थियो । मन भरी पीडा र दुखले भरिएका भावना हरु खेलिरहेका मात्र थिए ।
अनगिन्ति पिडा हरुको बाबजुत मन भित्र आशाको एउटा सानो किरण भर्खरै उदाउन लागेको हो कि जस्तो गरि झुल्कने चेस्टा गर्दै थियो । एउटा दुःखी जीवन बाचिरहेको मान्छेको मनमा आशाको किरण पलाउनु निकै महत्वपुर्ण कुरा थियो मेरो लागी ।
एजेन्सी मार्फत मलाई इजरायलको भिषा निस्किन सबै प्रकृया तयारी अबस्थामा रहेको हुदा मलाई पनि तयारी अबस्थामा रहनको लागी जानकारी गराएका थिए । त्यति बेला दशै र तिहार छोरी हरु संग मनाएँ ।
तिहार सकियो । तिहारको लगत्तै मेरो भिषा पनि आएको खबर पाएँ । मेरो छोरी हरु संगको दशैंको खुशी अचनाक शोकमा बद्लियो ।एकातिर आफुलाई अथाह दुखको भुमरी बाट पार लगाउने एकमात्र बिकल्प को ढोका खुलेको छ अर्को तिर कल्कलाउदा दुधे सन्तान लाइ चटक्कै छोडेर हिड्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो ।
जब मेरो घर छोड्ने बेला हुँदै थियो ठुली छोरीलाई निद्राले छोड्यो उ ब्युझेर उठी । प्राय मैले ओछ्यान छोड्दा संगै बिउझिने बानि छ उसको । सायद काखको न्यानोमा निदाउने बानि ले हो कि । म उठे पछी मेरै लुगाको फेर समातेर पछी लागि रहन्छे । उसले अचानकै सोध्न थाली ममि हजुर कहाँ जान लाग्नु भएको भनेर ।
अहिले बैनी उठ्छे र रुन्छे त्यसैले उसलाई पनि संगै लिएर जाम भन्न थालि । उसलाई अहिले सम्म पनि आफ्नी आमा एक्लै कतै सुदुर परदेशमा आफ्नो सुनौलो भविष्य खोज्न जान लागेकी हो भन्ने पत्तोफाट थिएन । बरा निर्दोष मेरी छोरी आफु पनि आमा संगै जान लागेको आभाष ले रमाउन थालि र संगै बहिनि लाइ पनि लिएर जान आग्रह गर्न थालि ।
ठुलो नानु लाई बिस रुपैयाँ हातमा थमाउदै मैले उसको लागि हेलिकप्टर र बैनीको लागि गाडी लिन जान लागेको भनेर बैनिको ख्याल गर्नु भनेर सिकाएँ । आज्ञाकारी मेरी छोरी ले आफु सफा भएर बस्ने र कसैलाई दुख नदिने अनि बैनीको ख्याल गर्ने भन्दै निर्दोष वाचा हरु गर्न थालि । कति ज्ञानी मेरी छोरी भन्न मात्रै लागेकी के थिएं नानू पनि सङै रुन पो थालि ।
मेरो छातीमा अचानक ठुलो जाँतोले थिचे जस्तो भयो । भक्कानिएर रोएर आफैलाई रित्याउँन पनि नमिल्ने के गरूँ …दुइ टुक्रा आफ्नो प्राण आमाको जिम्मा लगाउदै फुट्न लागेको छाती लिएर म आफ्नो र छोरीहरुको सुनौलो भविष्यको लागि सुदुर परदेशको यात्राको लागि घर बाट बिदा भएँ ।